Xaliimo Yareey oo shaaca ka qaaday in loo baahan yahay ‘dowlad aan Xalane laga xukumin!’ | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Xaliimo Yareey oo shaaca ka qaaday in loo baahan yahay ‘dowlad aan...
Xaliimo Yareey oo shaaca ka qaaday in loo baahan yahay ‘dowlad aan Xalane laga xukumin!’
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddoomiyaha Guddiga Madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaranka, Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yareey) ayaa sheegtay in dowlad goboleedyada dalka ay ku dhaqmaan Dastuur u gaar ah oo ay sameysteen, balse ay sheegtay in uusan waafaqsaneyn Dastuurka dalka.
Xaliimo Yareey ayaa sheegtay in qolo walba ay meel gaar ah u socoto, taasina ay dib u dhigeyso dowladnimada Soomaaliya oo haatan ah mid curdun ah.
Waxayna ku baaqday in si wadajir ah la isaga kaashado dhismasha dowlad loo dhan yahay.
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaranka Xaliimo Yareey oo hadal Arbacadii Maanta ka jeedisay Shirka sanadlaha ah ee Garsoorka dalka ayaa sheegtay in dalkaan uu u baahan yahay dowlad aan Xalane laga xukumin.
Ugu dambeyn, hadalka Guddoomiye Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yareey) ayaa waxa ay ku soo beegmayaan xilli muran xoogan uu kajiro doorashooyinka dalka oo aan weli heshiis laga gaarin.